Inona no atao hoe Rock Panel?
Home / Interior design / Inona no atao hoe Rock Panel?
2021 / 08 / 04 FisokajianaInterior design 5958 0
Ny takelaka vita amin'ny vatolampy vita amin'ny keramika dia vita amin'ny akora voajanahary amin'ny alàlan'ny fizotrana manokana iray, nopetahana tamin'ny fanampian'ny milina maherin'ny 10,000 taonina, natambatra tamin'ny haitao famokarana mandroso, ary nopetahany maherin'ny 1200 ℃. Izy io dia mahatanty ny fanapahana, ny fandavahana, ny fikosoham-bary ary ny fizotran'ny fikirakirana fitaovana porselana vaovao manana habe be loatra. Ny vongan-kazo seramika dia ampiasaina indrindra eo amin'ny sehatry ny takelaka an-trano sy ao an-dakozia.
Tao anatin'izay taona faramparany izay, niaraka tamin'ny fananana ara-batana tena tsara, ny vato fisaka dia nanjary supernova amin'ny fitaovam-piarovana ny tontolo iainana ary hajain'ny mpamorona tokoa.
Amin'ny maha karazana vaovao eo amin'ny sehatry ny famolavolana trano, rock panel home manana famaritana lehibe, endrika matanjaka, loko isan-karazany, fanoherana ny hafanana avo, anaovan'izy ireo sy vodiny, fanoherana ny zahana, asidra sy fanoherana alkali, formaldehyde aotra, fahasalaman'ny tontolo iainana ary toetra hafa raha ampitahaina amin'ny vokatra famokarana trano hafa.
Miorina amin'ireo tombony rehetra ireo, ny takelaka rock dia ampiasain'ny olona tia trano maro amin'ny fananganana endrika, gorodona anaty, rindrina, habakabaka, fidiovana kabinetra, takelaka fanaka ary saha hafa. Ka ahoana izany? Mijery ambany ianao.
Miankina amin'ny ny toetra ara-batana amin'ny fanoherana ny afo, ny fanoherana ny fanala ary ny fanoherana ny hafanana avo, rock panel dia safidy tena sariaka ho an'ny fananganana facade fitaovana, ary ny naoty fanoherana afo dia A1.
Ny fananana manohitra ny fanala dia avy amin'ny fitsapana mafy fanoherana ny fanala mandritra ny fizotry ny famokarana, ary izany dia mahatohitra -80 ℃ maripana ambany, noho izany dia afaka manohitra ny hatsiaka tsy misy simba izy io.
Rindrina sy gorodona ao anaty
Ny Rockboard dia manana ny toetran'ny fanoherana ny tasy sy ny fanoherana, koa mety tsara amin'ny rindrina sy gorodona anatiny izy io.
Rockboard dia miteraka hafanana sy tsindry ambony. Ny hamafiny dia mihoatra ny kilasy faha-5. Tsy ho voarangotra na ho simba amin'ny antsy vy izy io, noho izany dia mahazaka akanjo vita amin'ny gorodona!
2, fanoherana fanoherana
Eo ambanin'ny herin'ny fanerena ny milina fanamafisam-peo lehibe, ny vato fisaka dia manana hakitroka avo lenta ary manana sosona fiarovana nano-mahaleo tena. Manana ambaratonga 5 amin'ny fitsaboana tsy misy pentina izy io, tsy tafiditra ao anaty ny tasy. Raha maloto izy, mamafa lamba famaohana lena, azo amboarina mora foana izy io.
Counter an'ny kabinetra
Rockboard dia ampiasaina ihany koa ho an'ny countertops kabinetra noho ny toetran'ny fanoherana ny bakteria, ny bakteria, ny hamafiny ary ny fiatraikany.
1, ny hamafin'ny fanoherana sy ny fiatraikany
Ny hatevin'ny vato fisaka manomboka amin'ny 3mm ka hatramin'ny 20mm. Na ny takelaka vato manify indrindra aza dia mafy be. Izy io dia afaka manohitra ny hamafiny sy ny fiatraikany.
Ny fanoherana ny fiantraikan'ny takelaka vato matevina 6mm dia mitovy amin'ny granite 35mm, na dia tapatapanao hena na hokapohinao ny taolam-bato, dia tsy hisy tapaka.
2, Anti-bakteria sy anti-bakteria
Ny vato fisaka misy ambonin'ny sakafo-kilasy, izay salama sy sariaka amin'ny tontolo iainana. Nandalo ny fanamarinana NSF izy, noho izany tsy mila manahy momba ny bobongolo hanafika ny banga ianao. (NSF no ivontoerana iombonan'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana momba ny fiarovana ny sakafo sy ny fiarovana ny rano fisotro ary ny fitsaboana.)
Sehatra ho an'ny efitrano fandroana
Tena tsy afa-mivoaka ny vatolampy vato. Io no taila tsara indrindra eny an-tsena ankehitriny. Manana taha permeation farafahakeliny 3,000 faritra isaky ny arivo izy, raha vato slate kosa manana taha 2,000 XNUMX isaky ny tapitrisa ny tahan'ny permeation. Azonao ampiharina amin'ny efitrano fandroana amin'ny fahatokisana tanteraka izany.
Ankoatry ny, ny vongam-bato avo indrindra dia manakana ny fidiran'ny tasy. Tsy mila miahiahy momba ny rano maloto sy tasy ianao mitsoraka ao anaty vato, ary mora koa ny manadio.
Ampiasaina amin'ny fanaka
Amin'ny tena fampiasana azy, ny vato fisaka dia mifanentana tsara amin'ny fanaka ihany koa, ary ny toetoetran'ny hazavana, ny fahamendrehana, ny fahalemena ary ny plastika ihany koa no fototr'izany.
1 in Manipy
Ny hatevin'ny latabatra vato vato dia 1/3 amin'ny taila nentim-paharazana.
2 、 Jiro
Ny lanjan'ireo taila nentim-paharazana dia 23 ~ 27kgs / ㎡, raha toa ka 7kgs / ㎡ ihany ny salan'isan'ny vato fisaka somary manify.
Ny haben'ny tokana amin'ny hatevin'ny 3mm 1.2 × 3.6m, ny halemem-panahiny dia azo aondrika ho andohalambo.
4, plastika mahery
Ny tontonana rock dia azo atsofoka, nohosorana, notapahina ary fanodinana lalina hafa, mety amin'ny fanaovana endrika isan-karazany.
1, takelaka lehibe
Ny haben'ny takelaka rock dia malalaka, izay mihoatra noho ny ampy amin'ny rindrina haingon-trano fotsiny, ary ny habe mahazatra dia
3600 × 1200mm × （3mm 、 6mm）, mety amin'ny rindrina, vita, tontonana varavarana kabinetra ao an-dakozia.
3200 × 1500mm × (6mm, loko vitsivitsy ihany no manana 3mm), mety amin'ny rindrina, vita, tontonana varavarana kabinetra ao an-dakozia).
3200 × 1600mm × (12mm, 20mm), ho an'ny latabatra kabine ao an-dakozia, ambony latabatra, gorodona.
2600 × 1200mm, 2600 × 1500mm, ampiasaina amin'ny fanaingoana tetikasa fotsiny.
2, firafitra miloko manan-karena
Ny firafitry ny lokon'ny vatolampy dia manan-karena: loko madio, vatolampy volkano, voa vato, voamaina lamba, voan-kazo, vato tany am-boalohany, vato soa sy firakotra hafa no hita, fa koa eo ambonin'ny velaran'ny mikasika sy ny hazavana.
△ andiam-bato volkano
△ Andiana voamadinika lamba
△ Andiam-bary vato
△ Andiam-bary vita amin'ny hazo
△ Andiam-bato tany am-boalohany
△ Andiam-bato mihaja
△ Matte ambonin'ny
△ Sasao ny voam-bary
△ Voninkazo avo lenta
△ ambonin'ny marefo
Fananganana tontonana rock
Misy karazany roa ny teknikan'ny fananganana vato fisaka: mametaka sy mihantona maina.
Amin'izao fotoana izao, ny tena be mpampiasa eo amin'ny tsena dia dingan'ny fametahana ataon'ny mpanamboatra. Mandritra ny fanamboarana, amin'ny fampiasana zavamaneno sy fitaovana manokana, dia afaka mamaha ny olana toy ny takelaka vato lehibe, sarotra entina ary fametrahana tsy milamina.
Ho fanampin'izay, ny tetikasa mampiasa tantely vato mitambatra tantely tantely mihantona, dia tena fanao ara-toekarena sy maharitra ihany koa. Izay tokony hampiasaina dia miankina amin'ny toe-javatra fananganana eo an-toerana.
Fomba fisokirana vato fisaka: fitsaboana amin'ny fakany ahitra → fanamafisana ny tsipika bala → fiomanana amin'ny fametahana → fanamboaran-tsoroka → fisaronana vato fisaka lehibe → fisokirana vato lehibe → fanamafisana ny fihoarana → fitaovana fanamafisam-peo hanampy amin'ny fanitsiana ny haavony → ny fanadiovana sy ny fiarovana an-tampon'ny → ny fitsaboana.
Misy karazana takelaka vato 2 mihantona maina koa: alim-bolan'ny alim-bolan'ny alim-borona vita amin'ny volom-boasary vita amin'ny volom-boasary + famaohana vy.
(Ho an'ny antsipirian'ny fizotran'ny fananganana tontonana rock, tsy ho tanisinay eto daholo ireo.
Vidy sy marika amin'ny tontonana Rock
Ary farany, andao haka famintinana kely.
Previous :: Inona no atao hoe loko malay? Next: Malaza ny fomba Wabi-Sabi, toy izany koa ny micro-simenitra!